၉/၁၁ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွားပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀ အကြာမှာ အမေရိကန် ဘာပြန်ရခဲ့သလဲ - Xinhua News Agency
၉/၁၁ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွားပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀ အကြာမှာ အမေရိကန် ဘာပြန်ရခဲ့သလဲ
သမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် အားလုံးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် တိုက်တွန်း
တရုတ် နှင့် ဗြိတိန်တို့ လျှပ်စစ်ကားများ ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်
ပြီးခဲ့သည့် စနေနေ့သည် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ၉/၁၁ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ပြည့်မြောက်သည့် နေ့ဖြစ်ပြီး ယင်းသို့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် အမေရိကန်တို့က “အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး စစ်ပွဲ” ကို ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။
၎င်းတို့၏ အကြမ်းဖက်မှု နှိမ်နင်းမှု နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာ စစ်ပွဲကာလအတွင်း ကမ္ဘာပေါ်၌ ပဋိပက္ခများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် သေကြေပျက်စီးမှုများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းသုတေသန တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Brown တက္ကသိုလ်က စစ်ပွဲများကြောင့် ကုန်ကျစရိတ် စစ်တမ်း ကောက်ယူမှုတွင် ၉/၁၁ အကြမ်းဖက်မှုအပြီး အမေရိကန်တို့၏ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်၍ အာဖဂန်နစ္စတန် ၊ ပါကစ္စတန် ၊ အီရတ် ၊ ဆီးရီးယား နှင့် ယီမင်နိုင်ငံ အပါအဝင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် လူပေါင်း ၉၀၀,၀၀၀ ကျော် သေဆုံးစေခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | 20 years after 9/11, what should U.S. reflect on?
BEIJING, Sept. 12 (Xinhua) — Saturday marks the 20th anniversary of the 9/11 attacks, after which the U.S. launched its counterterrorism campaign.
Yet its self-serving “war on terror” has brought even more chaos, destruction and death to the world over the past 20 years.
The Costs of War project of Brown University,aleading U.S. research university, has found that the number of people killed directly in the violence of America’s post-9/11 wars in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria, Yemen and elsewhere is estimated at more than 900,000.
“ကံကြမ္မာအကျိုးတူဖော်ဆောင်ခြင်း-၂၀၂၁” ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအားတရုတ် တွင် ဆက်လက် ကျင်းပ
တရုတ်နိုင်ငံထုတ်စစ်ဘက်သုံး ဝန်အားမြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လေယာဉ် Y-20 အား ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ၌ထုတ်ဖော်